Tuesday April 09, 2019 - 20:07:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay labaatan sanadood kadib ayuu wadanka Aljazaa'ir yeeshay madaxweyne aan aheyn Cabdi caziiz Botafaliiqa oo wadanka soo maamulayay tan iyo sanaddii 1999-kii.
Kadib kulan ay magaalada caasimadda ah ee Aljazaa'ir ku yeesheen xildhibaannada golaha baarlamaanka wadankaasi ayay madaxweynaha cusub ee wadanka ugu doorteen ninka lagu magacaabo C/qaadir Bin Saalix oo ahaa guddoomiyaha baarlamaanka.
Sida uu dhigayo dastuurka wadankaas udegsan marka Madaxweynuhu uu dhinto ama uu xanuunsado ama uu xilka iskacasilo waxaa xilka si KMG ah usii qabanaya guddoomiyaha baaralamaanka muddo ku siman 90 maalmood.
Ninka loo magacaabay madaxweynaha cusub ee Aljazaa'ir ayaa laga sugayaa in uu qaban qaabiyo doorashooyin madaxtinimo oo degdeg ah balse waxay wararku sheegayaan in uu kalimad cusub jeedin doono Jeneraal Qaayad saalix oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka melleteriga ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda difaaca Aljazaa'ir kaasi oo lafilayo in uu noqdo ninka talada kama dambeysta ah ka go'do ee wadanka.
Jeneraal qaayad ayaa ahaa Ninkii botafaliiqa ku cadaadinayay in uu iscasilo lana dhaqan geliyo qodobka 102 ee dastuurka wadankaas ee dhigaya in uu iscasilo madaxweynaha haddii xaaladdiisa caafimaad xumaato.
Dhinaca kale malaayiin qof Aljazaa'iriyiin ah ayaa wali dibad baxyo ka dhigaya magaalooyinka waaweyn waxayna codsanayaan in ay iscasilaan dhammaan mas'uuliyiinta nidaamkii hore lana maxkamadeeyo